Tag: fanehoan-kevitra haptic | Martech Zone
Tag: fanehoan-kevitra haptic
Saturday, May 22, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Raha mbola tsy naheno momba ny haitao Haptic ianao dia. Folo taona lasa izay, ny mpikaroka ao amin'ny MIT dia nanomboka namolavola fitaovana izay manome aingam-panahy mivantana ho an'ny olona hahatsapa zavatra virtoaly. Tao anatin'izay folo taona lasa izay, nanomboka nanam-pahaizana momba ny touchscreens ny teknolojia. Tamin'ny taon-dasa, ny Immersion dia naka sary an-tsary iray tamin'ny CES izay nanome tamberina haptic. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fahita matetika sy ny fanentanana miverina amin'ny rantsan-tànanao, azonao atao ny mamerina ilay fahatsapana azonao rehefa